I-TÜBİTAK 9 Izothola Abasebenzi Abaqhubekayo | RayHaber | raillynews
IkhayaJIKELELEImisebenziI-TÜBİTAK izocasha abasebenzi abangama-9 abaqhubekayo
06 / 05 / 2020 Imisebenzi, JIKELELE
UTubitak uzoqhubeka nokusebenzela abasebenzi
I-TÜBİTAK ithatha izisebenzi eziyi-9 zaphakade ukuba ziqashe eKocaeli. Eminye imibandela ekhethekile iyadingeka kulabo abafaka isicelo. Izicelo kumele zenziwe ngoMeyi 27, 17.00:XNUMX kwakamuva. Izicelo azemukelwa, ngaphandle kwezicelo ezenziwe ngokusebenzisa i- "Job application System".
IMIBONO EJWAYELEKILE YOKUQWAQWA KWAMAKHASIMENDE
a) Ukuvinjelwa emalungelweni omphakathi.
b) Ukungabi nalungelo lokubamba iqhaza kwinhlolokhono ngaphakathi kwesilinganiso sezimemezelo ezinenombolo yeTBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-2 neTBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3.
c) Ukungabi nalesi sifo noma isifo esithathelwanayo okungamvimbela ekwenzeni umsebenzi wakhe njalo.
d) Ngaphandle kobugebengu budedengu, ubugebengu obuhunyushwe kwezinye izijeziso zokuboshwa kwesikhashana kanye nezinhlinzeko eziguquliwe ngaphandle kwalokhu okubalwe ngezansi; Noma sebeboshwe izinyanga ezingaphezu kweziyisithupha noma bathethelelwe, babhekene nokuhlukumeza, inkohliso, ukufumbathisa, ukweba, ukweba ofanelekayo, inkohliso, inkohliso, ukuhlukunyezwa kokwethembana, ukukhwabanisa okukhohlisayo, ukukhwabanisa, noma inkohliso, ukungatholakali benecala lobugebengu noma ukushushumbisa, ukuvezwa kabi kwamathenda asemthethweni kanye nokuhweba, kwembula imfihlo yomsebenzi, ubugebengu obuhambisana nezimfihlo zombuso. Ukungabi nobulungu, ukuhlangana noma ukuhlangana nesakhiwo, ukwakheka noma amaqembu asesimweni soMthetho Wezomthetho Nombolo 667 noma izinhlaka, ukwakheka noma amaqembu anqunywe nguMkhandlu Kazwelonke Wokuphepha ukuthi enze ngokungahambisani nokuphepha koMbuso.
e) Abaviwa kumele babe ne-Graduation Ibanga le-avareji okungenani engu-4,00 kwezingu-2,50. (Lapho kuguqulwa izilinganiso zamabanga ebanga labafundi abazongena ohlelweni lweyunivesithi ohlelweni lwe-100 luye ohlelweni lwe-4, kuzosetshenziswa i-Providence Table of theGrades in the System of 4 in the System of 100).
a) Ukufaka isicelo sesikhangisowww.bilgem.tubitak.gov.t kuyinto”Udinga ukubhalisela i-Job application System. (Lapho udala i-CV yohlelo lokusebenza, wonke amadokhumenti adingekayo kumele afakwe ohlelweni nge-elekthronikhi futhi isicelo kumele senziwe ngokukhetha ikhodi yesethenjwa). Izicelo ngeke zamukelwe ngaphandle kwezicelo ezenziwe ngoHlelo Lokufaka Imisebenzi lweJobe.
b) Izicelo akufanele zithunyelwe ngaphambi kwe-27 / 05 / 2020: 17: 00.
c) Izicelo zizohlolwa ngokusebenzisa ikhodi yenkomba yokukhangisa. Abavunyelwe bazokwazi ukufaka izicelo ngokukhetha ikhodi yokubhekisa ohlelweni lokufaka umsebenzi. Izicelo ngaphandle kokukhetha ikhodi yesethenjwa ngeke zibhekwe.
d) Ngokuya nge-athikili (e) ye- "General Conditions to Sifunwa Abaviwa", izikhathi eziyi-10 isibalo sabasebenzi abazotholwa bephakeme kakhulu bazobizelwa inhlolokhono. Uma kukhona abanye abavotayo abanamamaki afanayo nelowokugcina, bazomenyelwa kwinhlolokhono.
e) Abafakizicelo bazohlolwa ngokwesimemezelo abasifakile ohlelweni lokufaka umsebenzi ngesikhathi sokufakwa kwezicelo zabo futhi uma imininingwane efakiwe ayilungile noma amanye amadokhumenti alandelayo alahlekile, isicelo sizobhekwa njengesingasebenzi.
I-CV yamanje (CV yakho kufanele ilungiswe ngezithombe ezinemibala, kufaka phakathi iTurkey, i-ID yaseTurkey nezinombolo zocingo).
Hlanganisa iDegree noma isitifiketi sokuphuma.
Isitifiketi se-YÖK Alumni (ukuphrinta nge-inthanethi nge-e-uhulumeni nekhodi yokulawula).
Idokhumenti Yomsebenzi Nomshuwalense Wezinsizakalo ezivela kubafundi abanolwazi
Idokhumenti ekhombisa isimo samasosha.
Qaphela: Yonke intuthuko nezimemezelo eziphathelene nenqubo zingatholakala kuwebhusayithi yeSikhungo sethu (www.bilgem.tubitak.gov.tr ​​/ http://www.tubitak.gov.tr) kuzomenyezelwa.